juillet 2018 – filazantsaramada
FANAVOTANA AO AMIN’I KRISTY
« Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy, » Romana 3:23-25 Sarotra amintsika ny mankato ny lalàna rehetra, nefa dia asain’Andriamanitra ankatoavina izany. Ny tsy fankatoavana ny lalàna no mahatonga ny fahafatesana. Hoy ny voasoratra ao amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada juillet 27, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANAVOTANA AO AMIN’I KRISTY
MAHAY NY ZAVATRA REHETRA JEHOVAH
« Sambatra izay hihinan-kanina ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra » Lioka 14:15 Raha nampianatra ilay nanasa Azy Jesosy dia hoy Izy: Raha manasa olona hisakafo ianao dia aza izay olona afaka mamaly izany aminao no asainao fa ny malahelo, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba,…dia ireo olona izay tsy afaka manasa anao hisakafo sy ireo olona tsy manan-kavaly aminao. […]
Publié parfilazantsaramada juillet 20, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAHAY NY ZAVATRA REHETRA JEHOVAH
SAMBATRA IZAY VOASARONA NY FAHOTANY
« Ary Abrahama nino an’Andriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izany. » (Romana 4:3b) Ny olona tsy mandika lalàna no lazaina hoe marina. Mahagaga anefa eto amin’ity andininy ity fa ny finoan’i Abrahama an’i Jehovah dia nisaina ho fahamarinany. Ao amin’ny Salamo 32:1 dia hoe: «Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany». Jehovah […]
Publié parfilazantsaramada juillet 13, 2018 juillet 13, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur SAMBATRA IZAY VOASARONA NY FAHOTANY
MAMELA NY FAHOTANTSIKA IZY
« Aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika. » Hebreo 12:1 Ny fanahiana no entana mavesatra tsy zakantsika, mitambesatra amin’ny fanahintsika. Mety mitarika amin’ny famoizam-po izany fanahiana izany ka miteraka ota. Aoka esorintsika izay rehetra entana mavesatra ary apetraka eo antongotr’i Jesosy. Ny ota no tena mahatonga fahafatesana ao anatintsika […]
Publié parfilazantsaramada juillet 6, 2018 juillet 6, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAMELA NY FAHOTANTSIKA IZY